Semalt Expert avy any Islamabad: Inona ny fikarohana sy fomba fiasa?
Ny ankamaroan'ny olona matetika dia manontany tena hoe ahoana tranokala fikarohana . Noho izany, inona ny motera fikarohana ary ahoana ny fomba fiasany? Ny tranonkala finday dia tranonkala ao amin'ny aterineto izay manampy ny mpampiasa mitady vaovao voatahiry ao amin'ny aterineto.
Amin'ny ambaratonga fototra indrindra, ny teny hoe 'motera fikarohana' dia ampiasaina hanoritana ny motera fikarohana momba ny mpitsikilika / spider ary koa ny torohay ampiasain'ny olona. Samy manangona ny lisitr'izy ireo amin'ny fomba samihafa ny karazam-pikarohana rehetra, na izany aza, amin'ity lahatsoratra ity i Sohail Sadiq, manam-pahaizana ambony indrindra avy amin'ny Semalt , dia mifantoka amin'ny mili-pikarohana Google.
Voalohany dia manana zavatra 3 ny fisavana:
1. Ny fikarohan'izy ireo amin'ny aterineto dia mifototra amin'ny teny manokana izay heverina ho manan-danja
2. Izy ireo no mitahiry ny endrik'ireo teny sy ireo toerana izay ahitana ireo teny
3. Izy ireo dia mamela ireo mpitsidika na mpampiasa hitady teny na marika amin'ny teny hita ao amin'io fanondroana io
Mandritra ny fizotry ny fikikisana, ny milina fikarohana dia mampiasa scriptes automatique fantatra amin'ny hoe spiders na crawlers izay mijery ny Internet. Ny mpikirakira dia tarihan'ny programa iray izay manome ny URL ho an'ireo scripts mba hikirakira.
Rehefa vita ny fandikana, dia apetraka ny kopian'ny tranokala ao amin'ny tranokala hita ao..Ny fandaharam-pizaran'ity tranonkala ity dia manoratra teny avy amin'ny pejy manokana miaraka amin'ny URL izay ahitana ireo teny hita eo amin'ny latabatra.
Rehefa miverina ny valiny amin'ny valin'ny fangatahana nataon'ilay mpampiasa iray, dia manome ny vokatra manan-danja indrindra miankina amin'ny fangatahana natao. Amin'ny ankapobeny, ny valiny dia miseho araka ny fepetra voafaritra izay tondroin'ireo algorithm izay ampiasaina handrefesana ny maha-zava-dehibe ny votoaty manohitra ny teny asehon'ny mpampiasa mitady fikirakirana manokana.
Na dia mampiasa ny tsiambaratelo aza ireo endritsoratra ampiasain'ireo fitaovam-pikarohana, ny isa amin'ny fotoana iray dia miseho amin'ny votoaty ary ny toerana ao amin'ny tranonkala dia matetika no fototry ny famaritana ny maha-zava-dehibe ny pejy amin'ny teny manokana. Ny vokatra izay heverina ho manan-danja dia voatanisa eo an-tampon'ireo valim-pikarohana fikarohana raha oharina amin'ny valiny tsy dia ilaina. Ny antony hafa dia mamaritra ny fomba fijerin'ny mpikaroka amin'ny sehatry ny fikarohana dia ny lohatenin'ny pejy, ny rohy anatiny mankany amin'ny pejy hafa, ny rohy fidirana avy amin'ny tranokalam-pahefana avo ary ny meta tags.
Valiny nomena alohan'ny vokatra organika
Amin'ny ankapobeny, ny voka-pikarohana dia mamoaka valiny amin'ny sokajy anankiroa: valiny voaisa sy vokatra voajanahary. Ny vokatra organika dia mitranga noho ny dingana voalaza etsy ambony. Etsy ankilany, ny vokatra voavidy dia tafiditra amin'ny teknikam-pambolena iray izay handoavana ireo fitaovan'ny webmasters mba hahafahan'ny tranokalany hita ao amin'ny valin'ny fikarohana. Ankoatra ny fanaovana antoka fa ny tranonkala dia voasokajy, ny fidirana amin'ny vola dia manome antoka fa ny mpitsikilo dia mitsidika matetika ny tranokalany. Ny karoka fitadiavana samihafa dia mamaritra ny valiny aloan'ny hafa. Na dia misy dokambarotra aza ny fampisehoana sasany, dia ny hafa kosa mampiseho azy ireo vokatra miaraka amin'ireo vokatra mahasoa.
Inona no atao hoe marketing marketing?
Ny marketing-marketing, fantatra amin'ny anarana hoe SEM, dia manondro ny fizotry ny fanovana ny tranonkala iray mba hanatsarana ny laharam-boninahitra ao amin'ny pejin-kaonty sy ny karoka fitadiavana. Amin'ny ankamaroan'ny fotoana, ny teny hoe SEM dia ampiasaina hanondro ireo teknikam-panafarana natao hanatsarana ny fikajiana ny tranonkala. Anisan'izany ny fandoavam-bola isaky ny klioba (PPC), ny fampidiran-tsokosoko, ny dokambarotra banjinina ary ny programa hafa momba ny varotra izay omen'ny fitaovam-pikarohana.
Fomba fikatsahana ny moto fitadiavana, izay fantatra amin'ny hoe SEO, dia dingana iray amin'ny fanovana ny vohikala sy ny votoatin'ny tranonkala mba hahatonga azy io ho mora kokoa amin'ny fisehoan-javatra momba ny fikarohana biolojika Source . Ireo teknika ireo dia ahitana:
Fanovàna meta na lohateny
Mialà amin'ny votoatiny na sary
Fampidirana rohy fidirana, rohy anatiny ary fifanakalozana rohy amin'ireo tranonkala manampahefana
Fanamafisana ny votoaty mampiasa tahiry PDF
Fanamafisana ny rafitry ny directory